Hurumende yeAmerica iri kubatsira nezvose, mari nechikafu.
Vachitaura neStudio7 kumuzinda weAmerica, mukuru anoona nezvekubatsirwa kwevanhu vanenge vapinda mumatambudziko kuUSAID, VaJason Taylor, vati kunyange hazvo vari kushanda nemamwe masangano mukugadzirisa migwagwa pamwe nekuvaka zvivakwa zvakaparadzwa, pari zvino vari kunyanyokoshesa zvakanyanya kubatsira nezvinhu zvekudya kuitira kuti hupenyu husarambe huchirasika.
VaTaylor vati dambudziko rakawirwa nevagari vekuManicaland rakakurisa zvekuti hurumende yeZimbabwe haigoni kugadzirisa dunhu iri vari yega pasina rubatsiro.
VaTaylor, avo vakashanyira dunhu reManicaland nechikopokopo cheWorld Food Program, kunova kwavari kuisa mari yerubatsiro vakatiwo chakanyanyovavhundutsa kuona kutambudzika mupfungwa kwevanhu vedunhu iri.
Vati vana vavakaona vanga vasina mufaro. Vati zvakakosha kuti mushure mekunge vanhu vekuManicaland vabetserwa nezvinhu zvakadai sezvekudya nekuvakirwa dzimba, vanofanirwa kuzobatsirwawo kuti pfungwa dzavo dzigadzikane.
VaTaylor vatiwo vari kuChimanimani neChipinge havana kuona pamwe nekumbosangana nevagari vaiti havasi kuwana rubatsiro nekuda kwebato rezvematongerwo enyika ravanotsigira.
USAID yatiwo ine hunyanzvi hwekudzidzisa vanhu vemuZimbabwe kuti vakwanise kutarisa muchadenga kuti vaone kuti madutumupengo anokwanisa kuitika riinhi, uye achibva nekupi, pamwe nematanho avangatora kudzivirira kuparadzwa kwehupenyu nezvinhu kana hurumende ikavakumbira.
Kubva zvaita dutumupengo reCyclone Idai, America yabatsira Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni maviri ane mazana matanhatu ezviuru zvemadhora.
Zvichakadaro hurumende , United Nations nemasangano akazvimiririra nhasi vaparura huronga hwekutsvaka nechimbichimbi mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekubatsira vakawirwa nedambudziko reCyclone Idai.
Zvinofungidzirwa kuti vanhu vangangosvika zviuru mazana matatu vanoda rubatsiro kudunhu reManicaland, uye pavanhu ava, zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe, vari vana vadiki.
Mumatunhu mapfumbamwe akavhiringwa neCyclone Idai, mune zvikoro zana nemakumi matatu nezvipfumbamwe zvakaparadzwa, izvo zvakasiya vana vechikoro makumi mapfumbamwe ezviuru vasina pekudzidzira.
Hurumende inoti vanhu vanodarika mazana matatu havasi kuzivikanwa kuti varipi, uye vamwe mazana matatu nemakumi matatu nevapfumbamwe vakafa mutsaona iyi.
Huwandu uhu hunotarisirwa kukwira.